माओवादीबाट मन्त्रीहरुको नाम टुङ्गो लाग्यो, नामावली सहित — Imandarmedia.com
माओवादीबाट मन्त्रीहरुको नाम टुङ्गो लाग्यो, नामावली सहित
काठमाडौ। सत्तारुढ गठबन्धनको घटक नेकपा माओवादी केन्द्रले पाउने मन्त्रालयहरूको टुंगो लागेको छ। हाल दुईवटा मन्त्रालय सम्हालिरहेको माओवादीले अब तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउने भएको छ। सोमबार बेलुका बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच भएको छलफबाट मन्त्रालयहरुको मोटामोटी टुंगो लागेको माओवादीका एक नेताले बताए।
हामीले पाउने मन्त्रालयहरुको लगभग टुंगो लागेको छ, ती माओवादी नेताले भने, ‘शिक्षा र स्वास्थ्यमध्ये एउटा मन्त्रालय हामीले पाउने भएका छौं। त्यसैगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भूमिसुधार मन्त्रालय पनि हाम्रो भागमा परेको छ। थप युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय हामीले पाउने भएका छौं।
यसअघि अर्थ र उर्जा मन्त्रालय पाइसकेको माओवादीले पाँच मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउने टुंगो लागेको ती नेताले बताए। देउवा र प्रचण्डबीच सोमबार मोटामोटी टुंगो लागेको भएता पनि मंगलबार शीर्ष नेताहरुको बैठक बसेर मन्त्रालयको भागवण्डालाई अन्तिम रुप दिइने स्रोतले बतायो। मन्त्रालयको भागवण्डा मिलेपछि दलहरुले आ–आफ्नो पार्टीमा छलफल गरेर मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउने नेताहरुले बताएका छन्। माओवादी नेता भन्छन्, ‘हाम्रो स्थायी कमिटी बैठकले मन्त्रीहरुको नाम टुंगो लगाउनेछ।
माओवादीबाट को-को बन्दैछन् मन्त्री ? माओवादीबाट मन्त्री बन्नेहरुको नाम लगभग टुंगो लागिसकेको स्रोतले ईमानदार मिडियालाई बतायो। माओवादी पाउने चार मन्त्रालयमा देवेन्द्र पौडेल, अञ्जना बिसंखे र महेश्वर गहतराजको नाम चर्चामा छ । बाँकी एउटा मन्त्रालयमा प्रदेश १ बाट सुरेशकुमार राई, सुदन किराती, शिवकुमार मण्डल र अमनलाल मोदीमध्ये एकजना पर्न सक्ने वा यी नाम बाहेक सिन्धुलीबाट हरिबोल गजुरेल पनि पर्न सक्ने स्रोतले बतायो।
त्यसो त सोमबार बालुवाटारमा भएको भेटमा अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादीबाट प्रस्तावित तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको नाम प्रधानमन्त्रीलाई टिपाइसकेको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ। तर, त्यो दाबीको खण्डन गर्दै माओवादीका एक नेताले भने, ‘हाम्रो स्थायी कमिटी बैठक नै नबसी नाम बुझाउने कुरै हुँदैन, स्थायी कमिटीको बैठकले मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउन बाँकी छ।
गठबन्धनले पाउने मन्त्रालयहरुको भागवण्डा मिलेको हो ? भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अनभिज्ञता प्रकट गरे । प्रधानमन्त्री र प्रचण्डबीचको दुई पक्षीय छलफलप्रति पनि अनभिज्ञता प्रकट गर्दै यादवले भने, ‘मन्त्रालयको टुंगो लागेको भन्ने कुरा थाहा पनि छैन, टुंगिएको पनि छैन।
यसैगरि,माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री बन्नेहरूको नामबारे औपचारिक रुपमा कुनै छलफल नभएको जनाएको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनका नेताहरुलाई आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री बनाउनेहरूको नाम दिन पटक-पटक आग्रह गर्दै आएका छन्।
गठबन्धनका केही पार्टीका नेताहरुले आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री हुनेको नाम टुग्याएपनि एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले भने आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री बन्नेहरुको नामबारे छलफल भैनसकेको बताए। सत्ता गठबन्धनबीच मन्त्रालयको टुङ्गो लागेपछि मात्रै पार्टीबाट क–कसलाई मन्त्रीमा पठाउने भन्ने निर्णय हुन्छ’, महासचिव भुसालले रातोपाटीसँग भने,‘मन्त्रालय नटुंगिएसम्म मान्छे जाने नटुंगो नलाग्ने मात्रै होइन,मान्छे जाने कुरै चल्दैन।
समाजवादीका एक नेताका अनुसार मंगलबारसम्म गठबन्धनले मन्त्रालय बाँडफाँडबारे टुंगो लगाउने शीर्ष नेताबीच छलफल भएको छ। ‘मंगलबार गठबन्धनका शीर्ष नेता बसेर मन्त्रालय टुंग्याउने कुरा छ। सायद आज मन्त्रालयको टुंगो लाग्यो भने बैठक बसेर मन्त्री हुनेको नाम टुंगो लाग्छ।
यसअघि एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट विरोध खतिवडा,रामकुमारी झाँक्री, प्रेम आले, किसान श्रेष्ठ, मेटमणी चौधरी लगायतको नाम चर्चामा आएको थियो। गत असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवाले अहिलेसम्म मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। गठबन्धनले लामो समयसम्म मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै आलोचना भैरहेको छ।